Posted by Tranquillus | Jan 6, 2018 | Tababarka internetka
Si dhaqso ah ugu tababar xirfadaha dijitaalka ah adoo isticmaalaya tabobarro xiiso leh oo lagu bixiyo bandhigga Tuto.com.
Weligaa ma maqashay Tuto.com ? Tababbarkan wuxuu ku saleysan yahay mabda'a "barashada bulshada". Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si dhakhso leh ugu tababarto xirfadaha dhijitaalka ah. Markaad ogtahay sida abaalmarinta xirfadaha kombiyuutarka ay ugu yihiin CV maalmahan, waxaad u maleynaysaa in qaadashada koorsooyin dhawr ah barta www.Tuto.com waxay kuu oggolaaneysaa inaad siiso kobcin dhab ah xirfaddaada xirfadeed.
Waa maxay waxbarashada bulshadu?
Bogagga Tuto.com, badankoodu waa koorsooyin tababar ah oo wax looga barto kombiyuuterka. Iyo si gaar ah barnaamijyada farsamada sida Adobe Photoshop, Illustrator iyo InDesign. Waxa ka soocaya MOOCskan iyo tartamayaasheeda waa xaqiiqda inay tahay "barashada bulshada". Marka waa maxay barashada bulshada?
Xaqiiqdii, mid kasta oo ka mid ah koorsooyinka, qolka fadhiga ee gargaarka ayaa loo heli karaa si loogu oggolaado ardayda inay si xor ah uga wada hadlaan. Iyada oo kaqeybgalayaasha kale ama xitaa tababaraha laftiisa. Sidaa darteed, su'aal kama jawaabi doonto muddo dheer. Dheeraad dhab ah oo loogu talagalay ardayda ka baqaya go'doominta badanaa la xiriirta tababarka khadka tooska ah.
Isweydaarsiga ayaa xuddun u ah ahmiyadaha kooxda Tuto.com. Xitaa waa suurtagal in la codsado la-talinta fiidiyowga ee loogu talo galay dadka caymiska yar lihi iyada oo la xusho "Koorso Pro". Qaabka fikirkaani wuxuu dammaanad ka qaadayaa dhammaan xubnaha madluhu inay si gaar ah u bartaan oo masaafada u dhammaystiran, oo la waafajinkaraan heer kasta.
Sheekada yar ee Tuto.com
2009, fr.Tuto.com ayaa ku dhashay. Fikradda aasaasiga ah waa inay bixiso tababar tayo sare leh. Kuwani waxaa bari doona macalimiin khibrad leh iyo ka sarreysa dhamaanba xanbaarsanaanta xirfadaha dijitaalka ah. Sidan oo kale, meerkulku wuxuu isku xiraa ardayda doonaya inay bartaan barnaamijka ugu caansan ee xirfadaha dijitaalka ah oo leh tababarayaal si fiican u yaqaan xirfadaha ugu muhiimsan.
Thanks to e-barashada barashada fiidiyoow fudud oo si sahlan loo fahmi karo, koorsooyinka oo dhan waa la dhammeeyaa oo waxaa ugu horeyn loogu talagalay bilowga bilowga sayniska kombiyuutarka. Dadka macaamiisha ah ee moobiilka, waxaa jira runtii shakhsiyaad, laakiin sidoo kale shirkado doonaya in ay si fiican u tababaraan kooxahooda si gaar ah si gaar ah. Codsashada Tuto.com waxay noqon kartaa xalka ugu fiican ee lagu baranayo aqoontaada dijitaalka.
Tababarada ay bixiso fr.Tuto.com
Kaliya Tuto.com waa koorsooyin la xiriira maadada sayniska kombiyuutarka. Tani waxay kala duwan tahay isticmaalka software xafiisyada barnaamijka sare ee barnaamijka, qalabka guriga, sawiridda sawirrada ama websaytiga tusaale ahaan. Koorso kastaa wuxuu baraha baraa software-yo adag, laakiin lagama maarmaanka u ah adduunka maanta.
Dabcan, dhammaan aasaasiga ayaa la daboolay. Casharrada Photoshop-ku waxay buuxiyaan qayb wanaagsan oo ka mid ah buugga cinwaanka ah ee fr.Tuto.com. Iyo sabab macquul ah: waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu waxtarka badan adduunka ee abuurista dhijitaalka ah. Sidaa darteed Apprentice naqshadeeyayaasha farsamooyinka ah waxay baran karaan sida loo maareeyo tifaftirka softiweerka A ilaa Z isla markaana lagu ogaado astaamaha cusub ee Photoshop CC. Kuwa raadinaya tababar ku saabsan wax ka beddelka fiidiyowga ee Adobe Premiere Pro, koorsooyin farsamo oo isdaba-joog ah ayaa tallaabo-tallaabo kuugu qaadi doona qalabka muhiimka ah ee ka kooban barnaamijyadan caanka ah.
Tababbarrada gaarka ah sida waafaqsan baahidaada
Ku-niyad-jabinta ama ku-darsiga xirfadaha cusub ee resumeygaaga waa mid deg deg ah oo dhexdhexaadin ah oo kaashanaysa platformka. Tani waxay u egtahay waxa sharxaya caansaanka. Waxaa jira qaybo qiimo kala duwan, hase yeeshee, waxay ku xiran yihiin hadafyada aad doonayso inaad ku gaarto tababarkaaga. Maaddaama mowduucyo badani ay daboolaan boggaga koorsada, waxaa suurtogal ah inaad adigu dhisato tababar dhamaystiran oo gebi ahaanba loogu habeeyey baahidaada.
Noocyada muhiimka u ah farsamooyinka casriga ah ee horumarsan, waxaad ka heli doontaa tayada aqoonta tayada leh si loo jebiyo dunida digital. Marka laga soo tago barashada sida loo isticmaalo Photoshop, Bandhigga weyn ee Tuto.com wuxuu bixiyaa waxyaalo badan oo cajiib ah. Laga soo bilaabo website-ka loo abuuro ranjiyeynta dhijitaalka ah, dhammaan dhinacyada webka waxay leeyihiin ugu yaraan hal koorso. Sidaas daraadeed waa ku haboon tahay inaad horumar ka gaarto dhammaan meelaha. Xitaa waa suurtogal in la raaco tababarka SEO ama si ay u bartaan sawir iyadoo loo marayo tabobar sahlan oo fiidiyoow ah. Mashruucu waa xaqiiqo ahaan isbeddelka waxbarashada.
Maxay yihiin qiimaha mareegta?
Waxay kuxirantahay hadafkaaga iyo heerka (horumarsan ama aan aheyn) ee aad rabto inaad gaarto, heerarka rukunka ee kaladuwan ayaa la heli karaa. In ka badan 1500 oo ah qalabka koorsooyinka fiidiyowga ah ayaa loo daawan karaa bilaash. Dalabkan xaddidan ayaa kuu oggolaanaya inaad tijaabiso Tuto.com ka hor intaadan dooran qaaciido qaali ah. Sidaa darteed, mid kasta oo ka mid ah qaababka kale markaa wuxuu leeyahay qiime u gaar ah. Tani waxay ku kala duwan tahay € 10 iyo € 50 celcelis ahaan. Koorsooyinku waa kuwo dhammaystiran, si wanaagsan loo qaabeeyey oo diiradda la saaray mowduuc gaar ah oo si qoto dheer loo baadhay.
Qaaciddada Tuto.com waxay ku haboon tahay dadka doonaya in ay bilaabaan xawaaraha. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo isticmaalo dhamaan sifooyinka barnaamijka aad horey u soo dhejisey sida autodidact, markaa si toos ah ayay idiinla hadlaysaa. Dhinaca kale, way ka duwan tahay haddii mudnaantaada ay tahay in la helo fursad tababar ah oo suurtogal ah. Xaaladdan, waxaad u baahan doontaa inaad maalgashato qadar yar si aad u dareento shaqeeyaha.
"Koorsooyinka Pro" waa fadhiyo aan ahayn diblooma, laakiin waa mid dhammaystiran, oo ah xirfad la siiyay. Waxay ku qumman yihiin inay kobciyaan resume oo ay kor ugu qaadaan aqoontaada aag gaar ah. Runtii waa barnaamij tababar aad u ballaaran oo ujeedadiisu tahay inuu kugu beddelo khabiir. Si aad u ogaato: waa macquul in aad u isticmaasho saacadaha la uruuriyay ee CPF (Koontada Tababbarka Shaqsiyeed) si aad ugu maalgaliso mashruucaaga Tuto.com. Ha ka waaban inaad wax weydiiso loo shaqeeyahaaga.
Tuto.com: Koorsooyinka Waxbarashada Bulshada Si Loo Tababaro Xirfadaha Shaqada. May 10th, 2020Tranquillus
horeKa fogaansho la'aanta-Hirgelinta Mawjadaha xunxun
socdaKa Baxsashada Cabsida Qofka-Ka Cabso sida Calaamadda Tallaabada